रिसोर्ट प्रकाशन सुरू भयो! | Martech Zone
रिसोर्ट प्रकाशन सुरू भयो!
आइतबार, जुन 25, 2006 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
केही हप्ता निद्रा र धेरै घण्टा पछि, म मेरो साथी, क्रिस Baggott संग रिसोर्ट प्रकाशन शुरू गरेको छु। विचार क्रिसले सोचेको कुरा हो तर म मेरो धेरै ब्लग प्रविष्टिहरूमा कुरा गरिरहेको छु। सामयिक र क्षेत्रीय वेब लगि ((ब्लगि)) अप्सुइंगमा जारी छ। इन्टरनेट त्यस्तो खालको स्थानमा खोज्नु जस्तै हो… अतिरिक्त साइटहरूका लागि कोठा असीम र छिटो र छिटो बढ्दैछ। वेब बढ्दै जाँदा, खोजी ईन्जिनहरू अझ जटिल हुनुपर्दछ र साइटहरू ध्यान दिन कडा र कडासँग संघर्ष गर्नुपर्दछ।
मलाई लाग्छ यसको उत्तर स्व-प्रकाशनबाट ध्यान केन्द्रित गर्दैछ। ब्लगहरू यसको लागि उत्तम उत्तर हो किनकि उनीहरू निजीकृत छन्। रूपक मैले व्यक्तिहरूसँग प्रयोग गरिरहेको छु यो यो हो कि यो तपाईंको स्टोरको अगाडि साइन आउट गर्नु वा बाहिर जानुहोस् र नमस्कार गर्नु बीचको भिन्नता हो। धेरै जसो वेब साइटहरू केवल 'साइनेज' हुन्। तिनीहरू मान्छेहरू वा साइटको पछाडिको कथा हेर्नको लागि अनुमति दिँदैनन्। ब्लगहरूले तपाईंलाई मान्छेहरूसँग बोल्न अनुमति दिन्छ र तिनीहरूलाई पछाडि बोल्न अनुमति दिन्छ।
रिसोर्ट पब्लिकेशनले यी सबै पक्षहरूलाई एकल साइटमा सँगै ल्याउँदछ। यो सामयिक (रिसोर्ट्स) हो। यो क्षेत्रीय हो (देश र स्थान द्वारा वर्गीकृत)। र यो व्यक्तिगत हो ... मान्छेहरू द्वारा लिखित हो जो रिसोर्टको स्वामित्व गर्दछ वा त्यहाँ आएका व्यक्तिहरू द्वारा। हामी आशा गर्दछौं कि अन्तिम परिणाम एक धेरै लोकप्रिय निःशुल्क साइट हो।
टैग: कम्पेन्डियमरिसोर्ट प्रकाशनहरूरिसोर्ट पबहरूरिसोर्टपबहरू
हितोपदेश र उत्पाद व्यवस्थापन